Ny maody olona voalohany sy ny Royale Pass dia tonga ao amin'ny PUBG Mobile | Androidsis
Fanavaozana vaovao PUBG Mobile: fomba fijery voalohany, maody "Mini-Zone" vaovao ary maro hafa
Manuel Ramirez | | Lalao Android, PUBG Mobile, Tutorials
Rehefa afaka andro maromaro niandrasana miaraka amin'ireo bitsika nalefan'ny ekipa fampandrosoana ny lalao lamaody mba hahalasa lava ny nifintsika, dia izay Misy fanavaozana vaovao PUBG Mobile; manokana 0.6.0. Amin'ity indray mitoraka ity Tencent dia mitondra antsika ho zava-baovao amin'ny maody vaovao ho an'ny olona voalohany ahafahanao mankafy toa ny milalao Battlefield.
Nefa mbola betsaka ny zavatra hafa, toy ny «Mini-Zone» vaovao izay mametraka anao amin'ny fomba aretim-po, hatrizay hanana mpilalao 100 miady amin'ny «Sakafo atoandro» ianao amin'ny faritra iray misy toerana voafetra be; mitovy amin'ny halaviran'ny maodely lalao arcade 9-minitra. Fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela ny PUBG Mobile izay manampy votoaty bebe kokoa amin'ny lalao amin'ny Android lamaody.
1 Fomba fijery vaovao amin'ny finday PUBG: Olona voalohany
2 Alefaso Royale ary moana ny mpilalao ao amin'ny PUBG Mobile
3 Ny lisitr'ireo zava-baovao ao amin'ny PUBG Mobile version 0.6.0
Fomba fijery vaovao amin'ny finday PUBG: Olona voalohany
Ity no iray amin'ireo maody andrasana indrindra ao amin'ny PUBG Mobile, taorian'ny nanambarany azy herinandro lasa izay, satria hamela anao mitsoraka mankamin'ny fifandonana avy amin'ny fomba fijery izay mpilalao marobe efa zatra hatramin'ny Battlefield na Call of Duty. Ity maody ity dia manana ny mampiavaka azy fa raha manomboka milalao miaraka aminy ianao dia hanomboka eo amin'ny faritra misy anao ihany, satria ireo mpilalao milalao ny maody olona voalohany ihany no hiatrehanao.
Ary mba hanomezana lanja bebe kokoa an'ity maody ity dia manana ny «Mini-Zone» koa izahay, fomba iray hafa haharetan'ireo lalao minitra rehefa miatrika mpilalao 100 amin'ny toerana kely ianao. Azonao an-tsaina sahady ny fihenjanana izay hitranga amin'ny fanitarana tany mitovy amin'ny lalao arcade.
Koa satria izahay dia eo amin'ny lafiny hita maso indrindra amin'ny PUBG Mobile, lazao fa azonao atao izany asio "hoditra" amin'ny fitaovam-piadiana sy fiaramanidina. Midika izany fa afaka mamoha sy mahazo entana kosmetika ianao mba hanomezana ny Kar anao ho vita Chrome ary amin'izay dia afaka hanavaka ny tenanao amin'ireo mpilalao hafa ianao.
Alefaso Royale ary moana ny mpilalao ao amin'ny PUBG Mobile
Avy eo manana andiam-baovao hafa isika izay tsy dia mahavariana tahaka ireo telo teo aloha, fa ny andavanandro amin'ny fifandonana dia tena zava-dehibe. Ny iray amin'izy ireo dia ny fahaizana mampangina ny namana misaraka. Eny, azonao atao "Akombony" izany tabataba izany avy amin'ny fahitalavitra amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa amin'ny ekipa; indrindra raha miara-milalao amin'ireo mpiara-miasa tsy fantatra ianao.
PUBG Mobile izao dia ahitana ny Royale Pass Season 1, endrika fandoavam-bola hahazoana zavatra kosmetika rehefa miakatra isika. Maimaimpoana ny pass ary afaka mampitombo ny haavony ianao amin'ny filalaovana, saingy afaka misafidy ny hividy ny "Elite" ianao handalo ambaratonga 20 indray mandeha ary amin'izay dia hahazo ireo zavatra rehetra ireo ho toy ny hoditra ho an'ny fiaramanidina. Manomboka amin'ny 23 euro izany. Izy io koa dia a fomba fisaorana ireo mpandraharaha tamin'ny famoahana lalao mahafinaritra toy izany, azonao atao izao ny manao azy.
Afaka miaraka amin'ny Pass Royale isika izao jereo ny fitaovam-piadianay ao amin'ny fitaovam-piadiana, fomba tsara iray hitsapana kojakoja ary hankafizantsika ny M416, indrindra raha nanampy hoditra izahay. Raha ny tokony ho izy, ankehitriny ny fitaovam-piadiana manaparitaka dia afaka manimba kodiarana, mba hahafahanao manodina ny fiaran'ny ekipa fahavalo amin'ny fotoana mety indrindra.
Ny lisitr'ireo zava-baovao ao amin'ny PUBG Mobile version 0.6.0
Ny PUBG Mobile dia tsy mijanona amin'ny voalaza fotsiny, fa ny basy kosa manana ny UI misy azy ankehitriny, tafiditra ao ny maodely aziatika, azontsika atao mampifandray tambajotra sosialy 2 ary manome zavatra ho an'ny hafa aza. Raha ny tokony ho izy, tena raisina an-tanan-droa ny emotika, satria afaka mifanerasera amin'ny ekipa isika amin'ireo efitrano fiandrasana alohan'ny hidirantsika mivantana amin'ny ady.
Izany dia ny lisitr'ireo vaovao feno avy amin'ny PUBG Mobile kinova 0.6.0:
Fomban'ny olona voalohany.
Royale Pass avy amin'ny "Season I".
Mode vaovao: «Mini-Zone».
Fitaovam-piadiana sy hoditra fiaramanidina na hoditra.
Ankehitriny ianao dia afaka mahita ny fitaovam-piadianao ao amin'ny fitaovam-piadiana.
Ny basy izao dia manana interface na UI vaovao.
Melee fitaovam-piadiana avelao handrava ny kodiarana ny fiara.
Azonao atao izao ny mampikatona ny mpiara-miasa aminao tsirairay.
Rafitra fiarovana ambaratonga.
Modely avatar an'ny aziatika
Afaka mampifandray tambajotra sosialy 2 ianao.
Entana vaovao ao amin'ny magazay.
Lafiny iray miavaka amin'ny fanavaozana vaovao PUBG Mobile ihany koa ny nohatsaraina ny fampisehoana. Ho hitanao amin'ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny herinaratra ambany izy io, koa raha misy namanao manana kilema amin'io, dia torio izy ireo mba hanandrana indray.
Lehibe Fanavaozana ny PUBG Mobile anisan'izany ny maody ho an'ny olona voalohany, ny Royale Pass, maody "Mini-Zone" vaovao, ny hoditra ary ny sisa amin'ny vaovao izay efa nolazainay tsara. Izao dia mila manavao ny mpanjifa fotsiny ianao ary manomboka manandrana ny zava-drehetra.
Developer: BETA MANARAKA
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » PUBG Mobile » Fanavaozana PUBG Mobile vaovao: fomba fijery voalohany, maody "Mini-Zone" vaovao ary maro hafa
Pokémon Mandehana hampiditra fifanakalozana entana sy Pokémon
Manolotra vahaolana ho an'ny telefaona Flip i Motorola